तस्बिरजस्तो शोध–उपन्यास- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
वैशाख १, २०७५ किशोर नेपाल
काठमाडौँ — मूलत: कविका रूपमा चिनिएकी सरस्वती प्रतीक्षाको भावात्मक गद्यको नाम हो नथिया । उनको सिर्जनालाई उपन्यास होइन भन्न मुस्किल पर्छ, नयाँ जमानाको महाकाव्य भन्न नसकिने होइन । कविता होइन भन्न कठिन, कथा होइन भन्न झन् कठिन । सरस्वतीका लयबद्ध गद्य र पद्यको आनन्द लिनेहरू धेरै छन् ।
यो पटक उनी उपन्यासका साथ बजारमा उभिएकी थिइन् । बजारको इज्जत नथियासँग जोडिएका कथा र उपकथाहरू र यसको लयबद्ध शैलीले जोगाइसकेको छ । यो उपन्यासले नथियाको लयलाई नपछ्याएको भए मानवीय आस्थालाई तिलाञ्जली दिएको हो कि जस्तो लाग्ने थियो । सरस्वतीको यो उपन्यास एक हिसाबले धर्मविच्छेद हो र अर्को हिसाबले धर्मको पालना । फूलमाया बादी र फूलमाया बुढाथोकी कुवाको पानीका निम्ति झगडा गर्छन् । कहिलेदेखि सुरु भएको हो यो झगडा ? यसको त इतिहास नै छैन ।
उत्तेजनाको आगो र प्रेमका स्पर्शहरू एकैसाथ सुरु हुने र सकिने यो कस्तो पेसामा छन् बादीहरू ? सरस्वतीले उपन्यास अनुसन्धानको क्रममा भोगाइको यो असहजतालाई बुझेर पनि अवस्थालाई सम्हाल्न सकेकी छैनन् । उनले भावनाको बाढीबाट जे जे बचाउन सकिन् बचाउन । बेलाबेलामा उनको अनुहार तीक्ष्ण भावनाले निथ्रुक्क देखिन्छ । उपन्यासकारको अनुहारमा यस्तो दृश्य हेर्नु रमाइलो हुँदैन । उहिले ‘द कलगर्ल’ यस्तै यस्तै अनुसन्धानको एउटा कृति थियो जसमा कथाको चमक थिएन । त्यसमा कथाको भन्दा अनुसन्धानको लोभले लेखकलाई तानेको थियो । सरस्वतीले कथाकारको अस्मिता जोगाएकी छन् ।
अब यो नथिया एउटा तस्बिर हो । यो तस्बिरमा सरस्वतीले अलिकति राजनीति गरेकी छन् भनौं कि राजनीतिमा हात हालेकी छन् भनौं । तर, यतिभन्दा हुन्छ, सरस्वतीको यो हस्तक्षेप जायज हो । स–साना परिच्छेदहरूमा बाँडिएका कथा र उपकथाहरू सामलीको अनुहार हुन् । यसलाई नै उपन्यासकार सरस्वतीको राजनीति भनेको हो । यस्ता कथाहरूमा कथाकार र कथावस्तुलाई विभाजित गर्न सकिँदैन । सामली आफ्नो भोको बच्चालाई जुठो दूध खुवाउन चाहँदिन । तर, पैसा ऊ त्यही जुठ्यानबाट कमाउँछे । आठौं रंगमा सामलीको नथिया खुल्छ । के नथिया खोलिनु मुक्ति हो ? काखे बच्चा र लयमा त्यो बच्चाभन्दा फरक नदेखिने मोहम्मद नाम गरेको लोग्ने । यो त सामलीको पुरुषार्थको कथा पनि हो ।
नेपालमा पुस्तकको स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित भएको छैन । किताब पढ्ने लोभ पाठकमा पनि उत्तिकै हुनुपर्छ । यो तत्त्व लेखकमा भन्दा बढी नै हुनुपर्दछ पाठकमा । नेपाली जनता देशको परिधिभित्र छिर्न सकेका छैनन् अहिलेसम्म । उनीहरूको कथाले पीडितको रूपमा होइन, नायक र कलाकारका रूपमा जीवन्त हुन पाउनुपर्छ । देशका सामान्य मानिसहरू जसरी संघर्षहरूबाट पन्छाइन्छन्, त्यो दुर्भाग्य हो । जनताले परिवर्तनको आफन्तपन भोग्न नपाएको होइन तर त्यसका लागि कसैले जनताको साथ नै दिएन । आखिर सभ्यता नै मूलभूत कुरा हो । भनौं, आजको लेखन भविष्यमुखी समाजको निर्माणतिर अग्रसर देखिन्छ । साँच्चै हो र ? हो भने, यो नै हामीले खोजेको सृष्टिको आकार हो । त्यहींबाट नियति द्विविधामा पर्छ ।
सरस्वतीले नथिया ठीक समयमा लेखेकी छन् । नेपाली समाज पछिल्लो तीन दशकदेखि हुँडलिएको छ । त्यसभन्दा अघि पाँच दशकसम्म हुँडलियो । कुलीन र नवकुलीन वर्गका प्रतिनिधिहरू यो हुँडलिएको नेपाली समाजलाई मानिसको मौलिक बासस्थान बन्न नदिन लागेका छन् । तर, परिवर्तन रोकिँदैन । सरस्वतीको नथियाले भोलि कसरी परिवर्तनको बाटो देखाउनेछ ? यो सोचिरहनुपर्ने कुरा रहेन । आफ्नो भाग्यको निर्माण आफैं गर्ने खोजमा रन्थनिएको नेपाली समाज कहाँनिर शान्त होला ? भन्न सकिने अवस्था अहिले पनि आएको छैन । समाज अशान्त छ । तर, साहसबाट चुकेको छैन । साहसबाट चुक्नु भनेको शोक व्यक्त गर्नु होइन । नथियाले नेपाली उपन्यासले अहिले के खोजिरहेको छ ? त्यसको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । यो अहिलेको आवश्यकता मात्रै होइन ।
नथियाका बारेमा सरस्वती भन्छिन्, ‘काव्यिक यथार्थको नजिक नजिक ।’ उनलाई यस्तो पनि लाग्छ नथिया लेखेर उनले राम्ररी नै खतरासँग खेलिन् । अनि, आफू स्वास्नीमान्छे भएको सेन्स पनि उनमा आइरहन्छ । बादीको जीवनलाई मानिसहरूले फोहोरको थुप्रो मानेको जस्तो आडम्बरको आँखाले हेरेका छन् । तर, बादी मानिस हो । नेपाल र भारत सिमानाका शहर बस्तीबाट बग्दैबग्दै अझ ठूला र अझ ठूला शहर आइपुगेका गन्दगीहरू होइनन् । नदी र मानिसका बीचमा व्यतिक्रम भैसकेको छ । बादी कन्या जसरी उमेरको छोटो हदपछि रजस्वला नै नभएर पनि कन्या रहँदिन गंगाको गति र गन्तव्य पनि त्यही हो ।
सरस्वतीले खुद्राखुद्रामा आउने अवसरहरूलाई सँगालेर त्यसलाई थोकमा बदल्ने कला सिकेको स्वीकार गरेकी छन् । त्यो कला उनले कीर्तिपुर पढ्दा सिकेकी हुन् । दौडिन पनि कीर्तिपुरमा नै सिकेकी हुन् उनले । सामलीमा सरस्वती आत्मसात् जस्तै छिन् । सरस्वतीको नथिया ‘शोध उपन्यास’ हो । मैले कतै सुनें मात्र, केही बोलिनँ । कथा त कथा मात्रै हो । यो शोध र कल्पनाको भारी एकै पटक उठाउँछ । तर, त्यसो नहुन पनि सक्छ । मैले अघि उल्लेख गरेको ‘द कल गर्ल’ बढी शोध थियो कि नथिया छ ? मसँग ठ्याक्कै यसको उत्तर छ : नथिया । नथियामा शोध छ । समाजशास्त्रका धूलौटे सूत्रहरू छैनन् । नथियामा मानिसको उन्मुक्तिको कथा छ । कोठीबाट कोठीबाहिर सडक नियाल्नेको भीड छैन ।
नथिया पढ्दै थिएँ । मैले अचानक मुढा, गगनगन्ज र राजापुर सम्झिएँ । यहाँ शहरको छेउमा पोखरी थियो । पोखरीको मध्यभागमा उभिएका महादेवका जुंगा थिए । अचम्म लागेकै हो । पछि पो देखियो । कुनै भक्तले आफनो आँखाको सुविधाजनक उपचारका लागि महादेवलाई गगल्स चढाएछ । नथिया त्यसैगरी विभाजित छ । २७८ पृष्ठहरू अनेकन परिच्छेदहरूमा बाँडिएपछि यस्तै हुन्छ, महादेवलाई गगल्स चढाएजस्तो । सरस्वतीले आफ्ना पाठकलाई त्यसरी नै सम्मान गरेकी छन् । सम्मानको उनको सूत्र पनि सम्मान नै हो । सम्मानको त्यो कडीले नथियाबाट अनावश्यक शब्दका हूलहरू बाहिरिएका छन् ।
‘नथिया’ मा सरस्वती प्रतीक्षा अलि बढी नै प्रयोगशील देखिएकी छन् । बादीहरूले बोल्ने भाषामा उनले पूरै उपन्यास सकेकी छन् । यो एक समयको फेसन थियो । अहिले यो सामान्य भैसकेको छ र यसमा आकर्षण पनि रहेन । सरस्वतीले आफ्नो उपन्यास मार्फत बादीहरूका लागि एक सेट जीवन खोजेकी छन् । यो त्यति धेरै ठूलो माग होइन । तर, ठूला–बडा वा हुने–खाने वर्गका मानिसहरूमा हिच्किचाहट देखिन्छ । समय ज्यादै कुटिल छ । ल, विचार गरौं : नेपालगन्जका जुंगे महादेवलाई गगल्स लगाइदिएर कोहलपुरदेखि प्रदेश नम्बर ३ को खुलामञ्चसम्म जुलुस निकाल्ने हो भने के हुने होला ?
लेखक : सरस्वती प्रतीक्षा
प्रकाशक : बुक हिल
पृष्ठ : २७८
मूल्य : ४२५/–
प्रकाशित : वैशाख १, २०७५ ११:२१
राजनीतिका विवादभन्दा टाढा जनता सक्षम हुने कुनै विषय किन आउँदैन देशको सिंगल फ्रेममा ?
चैत्र २५, २०७४ किशोर नेपाल
काठमाडौँ — नेपालको राज्य व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिवर्तित भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिलाई विक्षोभको मनस्थितिले आहत तुल्याएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने लस्करै सम्पन्न भएका स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय चुनावमा कांग्रेसको हार स्वयं कांग्रेसका लागि मात्रै नभएर उसका प्रतिपक्षीहरूका लागि पनि उदेकलाग्दो थियो ।
जसले जे भने पनि जनआन्दोलनको मसाल त कांग्रेसले नै तेस्र्याएको थियो । तर, मतगिन्तीको पहिलो लहर अर्थात स्थानीय तहमै कांग्रेसले जित्ने छाँटकाँट देखाएको थिएन । ‘यो त कांग्रेसको गढ हो, नजित्ने कुरै भएन’ भन्ने कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूले चुनावको पहिलो चरणमै मैदान छाडिसकेका थिए । हार्दा पनि कांग्रेस यसरी तेस्रो स्थानमा आउला भन्ने त कमैले चिताएका थिए । खेल सम्भावनाको भए पनि राजनीतिमा चिताएको कुरा हुँदैन । त्यस्तो हुने भए चुनाव र हारजितको कसरत आवश्यक नै पर्ने थिएन ।
पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनपछि देशमा चुनावको बानी बसिसकेको छ । चुनावमा निर्वाचित भएर आउने उम्मेदवारले आफू र आफ्नो पार्टीका तर्फबाट दिएका आश्वासनहरूको पोको फुकाउँदैनन् । यो प्रसंग एउटै पार्टीका लागि मात्र लागू हुने होइन । सबै पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता र टाठाबाठा जनताले यसको भेउ पाइसकेका छन् । राजनीतिको खेलमा सामान्य, तर निरन्तर गरिरहनुपर्ने नियमित काम स्थानीय तहका पालिकाहरूले पूरा गर्ने चासो देखाउलान् । यस्तो आशा त गर्नैपर्ला । तर, पूर्वाधार र अरू अनेक छेस्किनीले बन्द गरेको विकासको ढोका यति छिटो, भन्नासाथ, खुलिहाल्ला भन्ने विश्वास गर्न अलि मुस्किल पर्छ ।
यी त साह्रै सामान्य कुरा हुन् । स्थानीय तहको नेतृत्व सबल मानिसको हातमा पर्‍यो भने काम हुने हो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत विभिन्न जातीय, क्षेत्रिय र सामाजिक आन्दोलनमा लागेका पार्टीका कार्यकर्ताले बाकसमा झरेको मतसंख्याको हिसाब–किताबमा अल्झिनुको कुनै अर्थ छैन । राजनीति गतिशील भयो भने यसले दिने परिणामले सबैलाई खुसी तुल्याउँछ । होइन प्राविधिक तर्कका आधारमा मात्रै राजनीतिलाई अघि बढाउन खोज्ने हो भने यस्तो विजय र पराजय आउने–जाने गरिरहन्छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्र वाम राजनीतिको वटवृक्ष हुर्काउने तयारी गरिरहेका बेला देशमा भएका वामपन्थी दल, व्यक्ति, समूह, अध्ययन केन्द्रलगायतका जेजति पनि संगठन छन्, तिनमा राजनीतिलाई सुविधाजनक अवस्थामा पुर्‍याउने हुटहुटी त्यतिकै उठेको छ । संघीय शासनका ठूला विरोधी भनेर नाम कमाएका चित्रबहादुर, आफ्नै किल्लामा नेमकिपाको स्वैच्छिक राजनीति गरिरहेका नारायणमान बिजुक्छे, एमाले र माओवादी केन्द्रको जस्केलोमा वार्ताको पहल गर्न उभिएका साना–ठूला र मध्यमस्तरका नेताहरू, यी सबै कुनै न कुनै हिसाबले कांग्रेसको आगामी भूमिकाको छनक पाउन खोज्दै छन् । हो, कांग्रेसले थोरै गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र जितेको छ । तैपनि ‘इक्वेसन’ मिलाउन कांग्रेसी पथको भेउ पाउनु उनीहरूका लागि पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
शेरबहादुर देउवा चुनाव र शासन दुवै गराउन सक्ने नेता होइन रहेछन् । कि उनले चुनाव गराउनुपथ्र्याे । कि सरकार चलाउनुपथ्र्यो । यो पटकको चुनावमा त्यो स्पष्ट देखियो । कुनै बेला पूरै सुदूर र मध्य नेपालमा उनको नाम ‘गोल्डेन कोटेड चमक’ चम्किइरहेको थियो । अहिले त्यो पुरानो साइनबोर्डबाट प्लास्टिक कोटेड रङ उप्किएजस्तो छ । अरू खासै त त्यस्तो केही देखिएको छैन । राजनीति रमाइलो चाहिं छ । कांग्रेस जति जति झगडा गर्छन्, वामपन्थीहरूको एकता उत्ति नै खुस्किन थाल्छ । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डबीच ‘वन टु वन’ कुरा हुनै पाएको छैन । आपस्तमै वन टु वन कुरा नभएपछि ओलीले के कुरा गरून् मोदीसँग ? नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एउटै पार्टी बनाउने हो भने पनि त्यसको धरातल साँघुरो छ । त्यसमा के गरून् मोदीले ?
नेपाली कांग्रेस आफैंमा पनि एउटा अगुवा पार्टी हो । यो पार्टीभित्र गरिब, धनी, पागल, सद्दे सबै अटाएका छन् । त्यहाँ मुख्य अटाउनुपर्ने चालीस प्रतिशत हुन् । जो अटाउँदैनन्, ती कार्यालय भवनबाहिर आएर भन्छन्, ‘मिलेको छैन है हजुर, मिलेको छैन । यता मिले त उता मिलिहाल्छन् ।’ कांग्रेसका नेताहरूमा आफ्नै किसिमको अहंकार छ । त्यो अहंकारको कुनै अर्थ छैन । जुन नेताका हातमा कार्यकर्ता छन्, त्यसलाई डामिहाले हुन्छ । राजनीतिमाथि कांग्रेसले मानौं कि काला जादु नै चलाएको होस् ।
पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनले नेपालमा राजनीतिक दलहरूको अधिकार स्थापित गर्‍यो । त्यो अधिकारको उपभोग धेरैले गरे । संविधान बन्यो । तर, त्यो संविधानले राजा र जनताका बीचको ठूलो खाल्डो पुर्न सकेन । अन्तत: राजाले राज्य छाडे । राजा र जनताले पूरै प्रजातान्त्रिक विधिअनुसार सार्वभौम शासन आफ्ना हातमा लिने चेस्टा गरेका थिए । यो पटक जनताले स्पष्ट भनिदिए, ‘राजा, भादगाउँले टोपी लगाएर निर्मल निवासमा बस्नु बेस होला ।
अहिले भर्खर सकियो तीन तहको चुनाव । कांग्रेसका नेता धेरैलाई थाहा थिएन होला, यसमा पनि शपथग्रहण गर्नुपर्छ । सत्तामा पुगेको एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नै नलिई बडो निष्ठापूर्वक, ईश्वरलाई पन्छाएर, राष्ट्रपतिका सामु मन, वचन र कर्मले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । पद, पैसा सुमर्न नपाउने ठाउँमा जागिर खानु वा निर्वाचन लड्नुउस्तै हो । तर, संघीयता त समावेशी हुन्छ । उसले सबैलाई समेट्नुपर्छ ।
नयाँ वर्ष नलाग्दै सबै मानिस घरतिर लागे । सांगे चुनावमा भोट हालेर, बूढीऔंलाको नङमा चुनावी पालिस दलेर निस्केको छ । ऊ एक्लै फतफताउँछ– यो भोट एकमुष्ठ बुझेर लैजानु नि । कसैले सोध्छ– भोट हालियो त ? सांगे बोलेन । लुसुक्क चुनावी रङ लागेको औंला देखाइदियो । त्योभन्दा बढी उसले केही बोल्न चाहेकै थिएन ।
कम्युनिस्टहरूले भनेका छन्– यो देशको शासन सबैभन्दा धेरै गरेको छ कांग्रेसले । ल, यहाँ हो त । १९९७ सालदेखि २०७४ सम्म एकुन्तार राज्य गरेको हो कांग्रेसले । यता बाटाघाटा थिएनन् । कहिले त हार्नुपर्छ । जनताले पनि हराउन पाओस् न यसो एक दुई पटक । अब, के राजनीतिक विश्लेषण हुन्छ योभन्दा बढी ? कांग्रेस किन लिखुरे भएको हो ? १७ महिना २०१५ सालमा । त्यसपछि त सत्ता बिरानो रह्यो कांग्रेसका लागि । सत्ता भनेको आफूले चलाउने हो । एमाले जोडेर, एमाले–माओवादी तोडेर, जोखना नै हेरेर, के चलाउनु सत्ता ?
देशमा म कम्युनिस्ट भएर मात्र बाँच्न पाउँm, म कांग्रेस भएर मात्र बाँच्न पाऊँ, म माओवादी भएर बाँच्न पाऊँ भन्ने अवस्था पनि छैन । कथित ध्रुवीकरणको ‘पूँज’ जति नै चहकिलो भए पनि ‘म उज्यालोलाई अँध्यारो कोठाभित्र बाँधेर राख्न चाहन्छु’ भन्न सक्दैन । नाकाबन्दीले नेपाली जनता निसासिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले ठोरीको बाटो जनताले त्राण पाउने उपाय खोजेका थिए । अहिले नाकाको समस्या छैन । दुवै देशका जनता साधारण कदकाँठीका छन् । प्रधानमन्त्रीको अहिलेको भ्रमणमा कतैबाट पनि वातावरण दूषित हुन नपाओस् । हा मिलाइसकेपछि स्यानेटाइजर लगाउनु राम्रो होला ।
देशमा बस्ने हामी जनता सबैलाई थाहा छ– सीमित आम्दानीको भरमा जीवन चलाउनु कति कठिन छ । स्कुलदेखि अस्पतालसम्म न बालबालिका सुरक्षित छन्, न महिला । देश बनाउने हामीले नै हो । अहिलेको परिस्थितिमा हामीसँग केही छैन । राजनीतिका विवादभन्दा टाढा जनता सक्षम हुने कुनै विषय किन आउँदैन देशको सिंगल फ्रेममा ?
प्रकाशित : चैत्र २५, २०७४ ०८:४८